Amava okufunda nokufundisa i-BIM kwiimeko eziqhelekileyo kwi-CAD-Geofumadas
Amava okufunda nokufundisa i-BIM kwimiqathango eqhelekileyo kwiCAD
NgoDisemba, 2018 AutoCAD-AutoDesk, Ukufundisa i-CAD / GIS, Microstation-Bentley
Ndandinethuba lokunxibelelana noGabriela ubuncinci kathathu. Eyokuqala, kwezo klasi zaseyunivesithi apho siphantse sahambelana kwiFakhalthi yoBunjineli boLuntu; emva koko kudidi olusebenzayo lweTekhnoloji yoKwakha kwaye kamva kwiprojekthi yedama laseRio Frío kwindawo yaseCuyamel, emantla eHonduras kunye nenkampani yeTunnelboring. Mna kumceli mngeni wam wokuphumeza iNeoData kwaye ndikhangela indlela abavavanyi abazishiye ngayo ezo zixhobo zakudala kwaye bafunda ukusebenzisa iLeica entsha evela eMunich esele izise ukuhlala ngeKhowudi yeBar; Wayesilwela ulawulo kunye nezobuchwephesha ukuba aye kwisingqisho sempambano umphathi waseColombia kunye nelinye iJamani.
Incoko yethu yakutshanje ibinomdla kangangokuba siye sagqiba ekubeni siyiguqulele kwinqaku. Namhlanje, njengoko ndihlala ndimbiza ngokuba nguGab!, Ekusenokwenzeka ukuba yi-BIM Management Master yokuqala kule meko, apho eyiHonduran ngentliziyo, kodwa ngameva osomashishini bamanye amazwe ngaphezulu kokuthembisa.
-Ii-Geofumadas kwiminyaka yamuva Ndithethe ngeBIM, nangona ngokungangqalanga. Ngaba ungasinika umxholo malunga nokugxila ekubalulekeni?
Ewe, nangona abaninzi sele bevile nge-BIM (iModeli yoLwakhiwo yoLwakhiwo), ababaninzi abayiqondayo ukuba yintoni le yokufunda indlela ye-BIM ukuyiphumeza kwiinkampani. Mhlawumbi enye indlela yokuyithatha kukukuxelela into endinayo ngabafundi bam boHlolo (i-Architecture, i-MEP kunye nolwakhiwo) kwimeko ye-BIM, ekuqaleni ndichaza iikhonsepthi, kwaye ke into evela kumava am. ucinga?.
-Kodwa kunjalo. Ndindlebe zonke.
Eyokuqala, kulabo basayiva u-BIM, ukuzola, sinokuthi yithuba elifutshane nje. Building Information Model (BIM) luchazwa model ulwazi natyetyiswa, equka iinkcukacha ezininzi, iziqalelo ukuba kungabelwana ngabantu abanomdla abaninzi kulo lonke appointment loyilo, ukwakha, ukusebenza kunye okurisayikilisha sakhiwo. Ngaphezulu okanye ngaphantsi kokuguqulela inkcazo ye-NBS (Isakhiwo sikaZwelonke sakhiwo).
Kungoko ukubaluleka kwale ndlela yokusebenza, yiyo loo nto kuye kwamkelwa kakhulu kumazwe ahambele phambili. Kuba isivumela ukuba sisebenze ngokukhawuleza, ngentsebenziswano, kunye neefayile zedijithali ngokupheleleyo, ngokubona okungcono kunye nokucwangciswa. Ukongeza ekucwangciseni iiprojekthi zethu ngokungqinelana nemigaqo esele ikho, nolawulo olungcono, ukufumanisa ungquzulwano, ukonga indleko, ukunciphisa inkunkuma kunye nazo zonke ngexesha elincinci.
Ngokuqinisekileyo kuyavakala kuhle kakhulu! Nangona ngamanye amaxesha inkolelo ayisebenzisi ukuzenzela, ikakhulukazi kumazwe athuthukayo apho izibonelelo zethu zoqoqosho zilinganiselwe. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba i-BIM iyakunqoba ngokukhawuleza okanye kamva.
Ewe, kodwa masingayi kuba nethemba kwasekuqaleni. Xelela abafundi bam ukuba amava akho abe njani.
Ok 🙂 Kwiva lam amava njengomcebisi kunye nomqeqeshi we-BIM. Emazweni ethu aseMntla yaseMerika, i-CAD ibaluleke kakhulu kwaye isetyenziswa ngokubanzi. Kukho abaqeqeshi abancinci abasebenzisa iNkcazo kunye neninzi kuphela ye-Revit Architecture; ziziqithi zisebenza yodwa. Ndive ngeenkampani apho umakhi owenza imodeli yakhe yokwakha e-Revit, ngoko uqhubela kwi-AutoCAD ukuze ezinye iikontraki kunye nabaqulunqi bakwazi ukusebenza kuyo. Ngokwenene kuyinkcitho yexesha.
Yiyo loo nto unyanzeliso lokuba, ukuba siza kusebenza ne-BIM, kufuneka siqeqeshe kungekuphela nje abayili abasebenza kule nkampani, kodwa nabacebisi kunye neekhontrakthi, ukubiza abona babalulekileyo. Ndibonile iingcali ezininzi kwilizwe lam ziyaneliseka yinqanaba labo kwaye abasafuni ukufunda, abafuni ukuphucula. Bahlala ne-AutoCAD kwaye kulapho yafa khona loo nto. Kufana nokuphila kwiminyaka kamabonwakude omnyama nomhlophe xa kukho umhlaba wonke wedijithali osilindeleyo.
-Ndiyayiqonda, loo mpendulo kutshintsho kunye nokuma kuqhelekile kwezi meko. Kodwa ngaba ukhe walubona naluphi na uphunyezo lweBIM eHonduras?
Andinayo iinyani yonke, kodwa ngokobuqu andikayiboni ukwenza kwe-BIM kwiinkampani okwangokuukuthetha ngeendlela, kungekho ukulinganisa i-3D nokunikezela kuphela -Ngamanye amaxesha kuyakhathaza kwaye ndicinga ukuba iwaka lixesha lokufuduka kwaye ubuye malunga ne-10 yeminyaka, mhlawumbi sele sele inamandla ngelo xesha. Kuyamangalisa konke ukunikezelwa kwemisebenzi ye-BIM kwamanye amazwe, ngokuqinisekileyo akukho lula ukwenza eso sigqibo ngenxa yezizathu ezininzi -ngoku-.
- Ucinga ukuba uthintela ntoni ukuze iBIM ingahambi ngesantya esiyilindeleyo?
Zininzi izinto zentlalo nezoqoqosho ezichaphazelekayo endiza kukuxelela kolunye upapasho malunga nokuba kutheni i-BIM ingazange igqibe ukuhlala kumazwe ethu akuMbindi Merika. Ukujonga kwicala elihle, ndiye ndafumana ithuba lokuqeqesha iingcali zokwakha kwiReit epheleleyo kwaye ndithathe ithuba lokwazisa iBIM kubo. Ingqolowa yentlabathi… Uninzi lwabo aluzange luva, kodwa xa besenza intetho banomdla; ukuze ukwazi ukwenza iiprojekthi ezintsonkothileyo, unikezelo, icandelo lokubonwayo. Ndizama ukugxininisa icandelo lethiyori, ngendlela ekufuneka bazenze ngayo iiprojekthi zabo, ndikubonisa ezinye iinkqubo ze-BIM ezikhoyo kwintengiso ezinje nge-AutoDesk Revit, iBentley AECOsim, ArchiCAD, iincwadi kunye nemigaqo ye-BIM ekhoyo, kwindlela echaphazela ngayo umhlaba wonke. Ndibafundisa ukuba i-BIM ayisosoftware okanye imodeli ye-3D, ngokuchasene nokucinga kwabanye abantu, yindlela yokusebenza.
-Ndiyaqonda kancinci. Ndandingumqeqeshi we-AutoCAD ngezo ntsuku xa kwakufuneka wenze ii-analogies phakathi kwetafile yokuzoba, ikhampasi, umlawuli ofanayo, ukakayi lwe-eraser, kunye nesangqa, iseti, ukucoca imiyalelo ...
Lo mfanekiso we Ukumkelwa kweBIM, kuyabamangalisa abafundi bam kunye neengcali endizinika iintetho. I-BIM kumazwe aphuhlileyo inendawo enkulu yokufikelela; kwamanye amazwe sele ingummiselo karhulumente. Xa siqala ngeeklasi, bayothuswa yindlela ekulula ngayo ukumodareyitha kwiRevit. Ndicinga ukuba i-AutoCAD inzima ngokuthelekiswa noHlaziyo kuba kulula ukwenza imodeli kwaye ubone ukuba yonke into iqhuba njani. Bayonwaba xa besenza ukhenketho kunye nevidiyo, xa bethatha iimbono ngekhamera naxa benokubona iziphumo zabo zokugqibela.
Ndambuza umfundi weenjineli zenzululwazi ngenye imini ukuba ucinga ntoni ngokutshintsha ukusuka kwi-AutoCAD ukuya kwi-Revit, kwaye wandixelela ukuba kuthathe ixesha elide ukwenza umtsi. Ke xa bedibene naye, yenye into, sinokuchitha iiyure kwaye banomdla kakhulu; ixesha liyabhabha. Ndikhe ndaba nabafundi abangazizo iingcali zokwakha ezinje ngeeNkqubo zeeNjineli kwaye bafunda ngokufanayo, bayavuya kuba besithi bazokuyila indlu yabo. Ngokuchasene noko abantu abaninzi bacinga, iinkqubo ze-BIM akunzima ukuzifunda, kodwa zifuna ukuzinikezela nokuzilolonga. Ukuba umntu usazi isiNgesi ngokulula kuba kuninzi ukuncediswa kwi-Intanethi kolo lwimi, kodwa kuhlala kukho iSpanish.
-Ndandikwikhosi ye-BIM eCentroCAD eNicaragua. Usizi lokuba le ngxaki indishiyile phakathi kwaye kufuneka sigqibe ikhosi kwi-Skype. Kodwa ndiyakhumbula ukuba indlela esebenzayo kunye nokuphuhlisa iprojekthi ngokuthe ngcembe yayinomdla.
Ewe ukukhula okungcono kwinkqubo ethe chu kuhle. Jonga umzobo, unikezelo lwangaphakathi lwendlu. Ekupheleni kweveki yokuqala, oko kukuthi, emva kweeyure ezili-17 zokufundisa, ndikushiya ngeprojekthi yakho yokuqala. Indlu enemigangatho emibini, eya kumodeliswa kwiintsuku ezimbini. Kuyamangalisa ukuba ezi nkqubo ze-BIM zokumodareyitha zibenza njani ubomi bethu bube lula, kwaye singasebenza ngokukhawuleza. Apha ndikubonisa imodeli eziswe ngomnye wabafundi bam: UNicolle Valladares.
Emva koko siye kuHlaziyo lweZakhiwo kunye neMEP kwaye kulapho izinto zinika umdla, kuba le intsha, uninzi lwezifundo zelizwe lam zinika uHlaziyo loYilo. Ke kunomdla kakhulu ukubona ezi modeli njengoko zinxibelelana kunye nendlela yokwenza intsebenziswano yeBIM. Njengoko ubona i-subprojects ngoqeqesho. Kwezi grafu zilandelayo unokubona iimodeli zolwakhiwo, ukulungiswa kwemibhobho yamanzi kunye neesetets zomzekelo xa sele sisebenza kunye.
-Ndiyiqonda imincili yakho ngeRevit. Kodwa undixelele ukuba ubafundisa nezinye iindlela.
Ewe kunjalo, njengoko besesitshilo, i-BIM ingaphezulu kwe-Revit, kwanakwindlela ye-Bentley Systems, inkqubo ye-I-model ine-BIM yolwamkelo ebandakanya ukuphathwa kweprojekthi, ulawulo lweeasethi olunomdla. Kodwa ndisebenzisa iRevit ngenxa yokuthandwa yi-AutoCAD kule meko, ijonge ngaphezulu kweRevit, ukubafundisa imigaqo yeBIM. Sikwabona iintetho ze-Presto (i-BIM 5D isetyenzisiwe kuhlahlo-lwabiwo mali), iBentley Synchro (BIM 4D isetyenzisiwe kuCwangciso), iDynamo (imodeli ephambili yenkqubo kunye neRevit), phakathi kwabanye, ukubashiya iliva lokuqhubeka nokufunda ezinye iinkqubo zokuphucula njengoko iingcali.
- Ndixelele indlela i-ajenda yakho ngayo kule mihla elandelayo.
Ngoku siza kuba nethuba lokuqalisa inkambo ye-Navisworks kwaye ndivuyiswe ukuqhubekela phambili kunye ne-BIM 4D (UkuCwangcisa), kunye neqela elincinci. Kuninzi ukufundisa kwi-BIM, kwaye abantu abazi konke oku. Xa kuninzi ulwazi kwi-Intanethi, akusoloko kukho inkcubeko yocwaningo, iyancipha kwizinto abazi. Yona mpazamo enkulu ekugqibeleni kamva igqithise i-bill, kuba loo nto ingayihlaziywa iyafa.
- Yaye uyintoni umbono wakho we-optics yabafundi ekupheleni kwekhosi?
Ndiyakwazi ukuqinisekisa ukuba abafundi bam, xa befumana ikhosi, banikezela utshintsho olukhulu, ukucinga kwabo kuvuleleke kuzo zonke iimeko abanokuzifezekisa kwilizwe le-BIM kunye ne-digital revolution. Kufana nokuba bayazi kakuhle kwaye abanakubuya. I-AutoCAD ayanele ngokwangoku ngoku.
-Ndiyavumelana nawe. Ukukhangelwa kwezifundo ze-AutoCAD kulawula uGoogle. Uyibona njani imiceli mngeni aba bafundi bajongene nayo emva kwekhosi?
Umba kukuba sinokuqeqesha abasebenzi, benze ukuba bacinge ngendlela eyahlukileyo, kodwa iinkampani kufuneka zibe neproofthiwe ukwenzela ukuba baqhubeke befumana amava. Ndadibana nomklami onokuyilungisa kwii-3 ubukhulu, kodwa kwafuneka asebenze kwi-AutoCAD kuba bekuphela kwento eyayisekho. Kuphazamiseka.
Ngoko ukutshintsha kwengqondo ku-BIM akukona kuphela kubavelisi, kodwa kufuneka kufinyelele ezintloko, abaphathi, abanikazi, abathengi, abaphathi beeprojekthi kunye nabakhi. Yingakho sithetha ngomjikelezo wobomi beprojekthi, kungekhona kuphela kwinqanaba lokuyila. Kumele kube yinguqu ebalulekileyo echaphazela yonke inkampani, kuba kuphela yinto esinokuyibona ngayo utshintsho olukhulu kwindlela esenza ngayo iiprojekthi zethu nge-BIM. Ngamafutshane, utshintsho lwenkqubo lubonisa ukuzibophezela nokuzinikezela.
Incoko yandishiya ndicinga. Inengcinga kakhulu, ngakumbi xa sithetha ngemiceli mngeni enale migaqo yomgaqo-nkqubo woluntu yokulawula i-BIM yeeprojekthi kwithenda. Ke, phantsi kwendlela enethemba, sicwangcise ikofu kwimozulu kaDisemba ebuyela kwiKrisimesi.
Kudliwanondlebe olungaqhelekanga, uGabriela Rodríguez, Injineli yezoLuntu, uMphathi kuLawulo lweBim ovela kwiYunivesithi yaseSpain yaseRey Juan Carlos. Ngemibuzo ekhokelwa ngumhleli weGeofumadas.com.
I-Bestseller I-Autodesk Revit - isiqalo kwinqanaba eliphakathiKuquka iikhwizi ezili-15 kunye noviwo lokugqibela. Kubasebenzisi boHlaziyo luka-2016, 2017, 2018, 2019, 2020 no-2021.€ 19.99€ 12.99 4.5
Uhlaziyo lweSakhiwo 2018 ukusuka kwiZero ukuya kwiHeroUkumboza izinto ezisisiseko, eziphakathi, kunye nezinto eziphambili zoHlelo lweSakhiwo 2018€ 19.99€ 12.99 4.5
I-Autodesk Revit MEP 2016Ukwakhiwa kweeNkcukacha zoLwazi ngeeMichanical, Electrical, kunye neeNjini zobunjineli€ 49.99€ 31.99 4.5
I-Bestseller Hlaziya uyilo lwe-2020-2021 ukusuka kwiZero ukuya kwiHeroUkumboza izinto ezisisiseko, eziphakathi, kunye neempawu eziphambili zoHlelo lokuYila 2020€ 19.99€ 12.99 4.6
I-Autodesk Revit Architecture 2016Ukwakhiwa kweeNkcukacha zoLwazi loKwakha€ 49.99€ 31.99 4.3
Hlaziya iiNtsapho- Ukusukela ekuqaleni ukuya kwiProUkudala iintsapho zisebenzisa i-Autodesk Revit 2020€ 99.99€ 64.99 4.6
Uhlaziyo lwe-MEP ye-2019 yee-Essentials kunye neziPhakathiUkugubungela izincedisi, kunye neempawu eziPhakathi zoHlaziyo MEP 2019€ 19.99€ 12.99 4.6
Isikhokelo sabaGqibeleleyo besiKhokelo sokuBuyiselwa ngokutsha kweVenkileFunda Uhlaziyo nge-Autodesk Expert Elite€ 19.99€ 12.99 4.3
Ukubuyiselwa kwe-2019 Architectural Course For Starting with ProjectIprojekthi ye-Revit Course€ 39.99€ 24.99 4.2
Ukuhlaziywa kwe-Autodesk ukusuka kuMqali ukuya kwiNgcali (uMqali)Uyilo loyilo kunye neZiseko zoLwakhiwo kunye neMep.€ 19.99€ 12.99 3.7
Uhlaziyo lweSakhiwo 2021 ukusuka kwiZero ukuya kwiHeroUkumboza izinto ezisisiseko, eziphakathi, kunye nezinto eziphambili zoHlelo lweSakhiwo 2021€ 19.99€ 12.99 4.6
I-HVAC (PART2) ene-Revit MEP kunye neeProjekthi eziSebenzayoIsikhokelo sokuSebenza kwakho ekuhanjisweni kobushushu boMoya kunye nokuPholisa umoya ngeeNkqubo neeNdawo (iProjekthi epheleleyo iQukiwe)€ 139.99€ 94.99 4.6
Uqeqesho lwe-2016 yoLwakhiwo ngokutshaYiya ngaphaya kweziseko ezisisiseko zemodeli yolwazi olusisiseko lweProjekthi yokwakhiwa kweePlani zabayili€ 49.99€ 31.99 4.4
Hlaziya uyilo-Isikhokelo sokugqibelaFunda iikhonsepthi, izixhobo kunye nokuhamba komsebenzi ukukuvumela ukuba usebenze ngokuzithemba ngaphakathi kwi-Autodesk Revit 2021.€ 19.99€ 12.99 4.5
I-Revit Architecture yabaqalayo"Hlaziya iTutorial". Funda ngoKwakhiwa kweZakhiwo eziNene. Ukuphakamisa iPortfolio yakho Izakhono eziSebenzayo zokuQeqesha ukuQeqesha.€ 44.99€ 28.99 4.4
Uhlaziyo loYilo | Funda uVuselelo lweeHacks eziNgena ngaphakathi eziHwiniFunda uVuselelo lweModeli yangaphakathi kunye neeHacks zokuHamba€ 19.99€ 12.99 4.2
Ukuhlaziya i-MEP: Ukuvuselela uVavanyo lwe-MEP noQinisekisoYiba yiNjineli ye-MEP: Ukwenziwa kweModeli yoLwazi€ 24.99€ 16.99 4.3
Hlaziya i-2021 yoSapho yoBume boShukumiso lweNdalo yeDynamo 2.6Yandisa ubuchule bemodeli yosapho lwakho ukuze usebenze ngaphandle komthungo kunye nedynamo ukwenza iintlobo kunye nokulungiswa kwemizekelo.€ 29.99€ 18.99 4.7
Ulwakhiwo lweVolksk yoPhononongo lokuFunda 2016Uyilo loLwakhiwo lweModeli yoLwakhiwo kunye noHlahlelo lobuNjineli boLwakhiwo€ 49.99€ 31.99 4
HLAZIYA ingxelo ye-MEP ngeDynamoInkqubela-phambili yokuJonga, uLwazi kunye noLawulo lweZibonelelo€ 99.99€ 64.99 4.4
Post edlulileyo«Ngaphambilini ILeica Airborne CityMapper - isisombululo esinomdla kwimephu yedolophu
Post Next Ukushiya iVenezuela ukuya eColombia-iOdyssey yamOkulandelayo »
Impendulo enye ku "Amava okufunda nokufundisa i-BIM kwiimeko eziqhele iCAD"
Amilcar Paz uthi:
Disemba, 2018 kwi
Igalelo elihle kakhulu ekuphunyezweni ukuyila.